तपाइँको ब्रान्डको लागि प्रत्यक्ष प्रसारण कत्तिको प्रभावी छ? | Martech Zone
सामाजिक मिडिया विस्फोट गर्न जारी छ, कम्पनियहरु सामग्री साझा को नयाँ तरिकाहरु को लागी एक विकसित खोज मा छन्। विगतमा, प्रायः सबै व्यवसायहरू अडिग थिए ब्लगिंग उनीहरूको वेबसाइटमा, जसको अर्थ बनाउँदछ: यो ऐतिहासिक रूपमा सस्तो, सजिलो, र ब्रान्ड जागरूकता उत्पन्न गर्ने सबैभन्दा समय-कुशल साधन भएको छ। र लिखित शब्द मास्टरिंग आवश्यक रहँदा, अध्ययनहरूले संकेत गर्दछ कि भिडियो सामग्रीको उत्पादन केही हदसम्म अप्रयुक्त संसाधन हो। अधिक विशेष रूपमा, 'प्रत्यक्ष स्ट्रिमि' 'भिडियो सामग्रीको उत्पादनले ब्रान्डको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याइरहेको छ।
हामी एक FOMO जेनेरेसनमा बस्दछौं
यो FOMO हो (हराइरहेको डर) जेनेरेसन। प्रयोगकर्ताहरू प्रत्यक्ष घटना सम्झिन चाहँदैनन् भन्ने डरको कारण उनीहरूले आफू छोडिएको महसुस गर्नेछन्, वा अस्वीकृत हुने महसुस गर्नेछन्। यो खेल संग जस्तै छ। तपाईं ठूलो खेलको पुन: प्ले देख्न सक्नुहुन्न कार्यबाट केहि विच्छेदन भएको महसुस गरेर। ठिक छ, अब यस विचारले डिजिटल मार्केटिंग संसारमा आफ्नो सेवाहरू जस्ता सेवाहरू मार्फत सहज गर्दैछ फेसबुक प्रत्यक्ष, यूट्यूब लाइभ स्ट्रिम, र पेरिसोप.
धेरै मार्केटर्सले आफूलाई पत्ता लगाउने पोशाक तस्बिर वा भिडियो उत्पादन गर्ने कि नगर्ने हो। यदि तपाइँ दुबै बीच निर्णय गर्न समस्या भइरहेको छ भने, भर्खरको अध्ययनले तपाइँको निर्णयलाई सूचित गर्न सक्छ। यस अनुसार सामाजिक मीडिया आज, फेसबुक भिडियोहरूको फोटो पोष्टहरू भन्दा १135% बढी जैविक पहुँच छ। यसका साथै भिडियोहरू हेर्नको लागि अधिक समय दिइएकोमा उनीहरूले तपाईंको ब्रान्डको बारेमा क्षणिक छवि भन्दा लामो सोच्दै रहन्छन्।
प्रत्यक्ष बनाम प्रि-रेकर्ड
प्रत्यक्ष बनाम। पूर्व-रेकर्ड गरिएको भिडियोको मामलामा, उही अध्ययनले पत्ता लगायो कि प्रयोगकर्ताहरूले अब लामो समय सम्म लाइभ नभएको भिडियोमा लाइभ भिडियो हेर्न 3x.० लाख खर्च गर्दछन्। त्यस पछि फेसबुक बाहिर आयो र भन्यो कि उनीहरूले प्रयोगकर्ताको फिडमा प्रत्यक्ष भिडियो नभएकोमा प्रत्यक्ष भिडियोलाई प्राथमिकता दिन्छन्, यसको अर्थ तिनीहरू उच्च देखिन्छन् र प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूलाई क्लिक गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ।
तपाईंको फेसबुक व्यवसाय पृष्ठमा प्रयोगकर्ताहरू जोड्दै
के तपाइँसँग फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ छ जुन तपाइँ प्रचार गर्न चाहानुहुन्छ? धेरै ब्रान्डहरू अग्रगामी ट्विटर र Instagram अनुयायीहरू लागि फेसबुक लाइभ दर्शकहरु। लक्ष्य भनेको भिडियो दर्शकहरूलाई उनीहरूको कम्पनीको फेसबुक पृष्ठमा ड्राइभ गर्नु हो, र अन्तत: तिनीहरूको वेबसाइटमा। प्रति दिन औसतमा billion अरब भन्दा अधिक विचारको साथ, यस माध्यमले धेरैलाई लाभांश तिर्ने देखिन्छ, र व्यवसायहरूलाई उनीहरूको उपभोक्ता आधार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। फेसबुकले समर्पित भिडियो समाचार फिड कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि गरिरहेको छ ताकि उपभोक्ताहरू आफुलाई आवश्यक भिडियो सामग्रीको अधिकार पत्ता लगाउन सकून्।
उपभोक्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै
प्रत्यक्ष स्ट्रीमको एकल सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको तपाईंको उपभोक्ताहरूको प्रश्न र सरोकारलाई सम्बोधन गर्नु हो। फेसबुक, पेरिस्कोप, र युट्यूब भरिका ब्रान्डहरूले प्रत्यक्ष भिडियो घटनाहरू समात्ने विकल्प रोज्दछन् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई च्याट विन्डो मार्फत प्रश्नहरू टाइप गर्न र 'व्यक्तिगतमा' प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिँदछ। धेरै व्यवसायहरूले यस कदमलाई अगाडि बढाउँदै छन् सेलिब्रेटीहरूलाई एएमए डब गरीएको कुरामा समावेश गर्नुहोस् (मलाई केहि सोध्नुहोस्) सत्र। यो त्यहीं हो जहाँ सेरेना विलियम्स जस्ता लोकप्रिय व्यक्तित्व नाइकेको यूट्यूब च्यानलमा एडभान्स फ्यानहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रत्यक्ष देखा पर्नेछ। ब्रान्डहरूले यी लाँगफोरम भिडियो सत्रहरू पत्ता लगाइरहेका छन् प्रयोगकर्ता संलग्नता र नेतृत्व उत्पादनको उत्तेजकमा प्रभावकारी। थप, तिनीहरू उत्पादन मा स्वभाव र व्यक्तित्व को एक स्पर्श जोड्नुहोस्।
तपाइँको उत्पादन को लागी के उत्तम हो निर्णय
तपाइँको ब्रान्डको लागि प्रत्यक्ष स्ट्रिमिंग राम्रो विकल्प हो कि भनेर निर्णय गर्नको लागि तपाइँको लक्षित दर्शकहरूलाई पहिचान गर्नुहोस्। कुनै पनि प्रकारको सामग्रीसँग जस्तै, यो उच्च गुणको हुनु पर्छ। तपाईं मोनोटोनमा बोल्दा वेबक्यामको अगाडि बस्न सक्नुहुन्न, उपभोक्ताहरू ड्रओभ्समा तपाईंसँगै आउने आशा गर्दै। भिडियो सामग्री उत्पादन गर्न पर्याप्त गाह्रो छ, तर कम्तिमा त्यहाँ तपाईं सम्पादन को लक्जरी छ। प्रत्यक्ष भिडियोको साथ, तपाईले के हेर्नुहुन्छ त्यो तपाइँले पाउनुहुन्छ। प्रत्येक भिडियोको उद्देश्य बुझेर र तपाईंको दिमागमा श्रोतालाई राखेर तयार गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
टैग: लाइभ स्ट्रिमिङ
माइकल पेग्स को संस्थापक हो Marccx Media, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी SEO र सामग्री मार्केटिंग मा विशेषज्ञता। मार्क्सएक्सएक्स अघि, पेग्सले गुगलमा व्यवसाय विकासमा काम गर्‍यो, डिजिटल मिडिया र विज्ञापन साझेदारी बनाउँथ्यो। उहाँ ब्लगर र पोडकास्टर पनि हुनुहुन्छ, iTunes शीर्ष १० नयाँ र उल्लेखनीय पोडकास्ट यू विश्वविद्यालयको होस्टिंग।
तपाईंको पूर्ण सामग्री मार्केटिंग चेकलिस्ट
के तपाईंको मार्केटिंग हाउस चट्टान वा बालुवामा निर्मित छ?